Boeing sy Azerbaijan Airlines dia nanambara fifanarahana ho an'ny Dreamliners 787, mpitatitra entana
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Boeing sy Azerbaijan Airlines dia nanambara fifanarahana ho an'ny Dreamliners 787, mpitatitra entana
Azerbaijan Airlines dia nanambara ny baiko ho an'ny Dreamliners 787-8 dimy hafa.
Boeing sy Azerbaijan Airlines (AZAL) dia nanambara ny baiko ho an'ny Dreamliners miisa 787-8 fanampiny ary fanoloran-tena hividy mpitatitra entana roa lehibe. Ny fifanarahana, nambara tamin'ny Dubai Air Show 2017, dia mitentina eo amin'ny $ 1.9 miliara amin'ny vidin'ny lisitra ankehitriny.
Ny fanoloran-tenan'ny mpitatitra entana dia hovitaina amin'ny manaraka.
Azerbaijan Airlines koa dia nanambara fa izy no ho mpanjifa fandefasana ho an'ny 787 Landing Gear Exchange Program izay hanomezan'ny Boeing Global Services vahaolana ho an'ny sarany ambany kokoa ho an'ny fiaramanidina Dreamliner, izay lasa fiaramanidina fito ankehitriny.
"Ny fandefasana fiaramanidina Dreamliner 787 fanampiny dia hampitombo ny fahaizan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka antsika, hahafahantsika manompo toeran-kaleha vaovao ary hitondra mpandeha bebe kokoa," hoy ny filohan'ny AZAL, Jahangir Askerov. "Faly izahay fa manitatra ny fiaraha-miasa amin'ny The Boeing Company, izay mpiara-miasa azo antoka amin'ny famatsiana fiaramanidina maoderina, ary manampy anay amin'ny fikirakirana sy fitazonana ireo fiaramanidina."
"Ankasitrahanay ny fahatokisan'ny Azerbaijan Airlines ny Boeing 787 sy ny fahombiazan'ny solika amin'ny fiaramanidina ary ny endrika mahafinaritra ny mpandeha," hoy i Kevin McAllister, filoha sady CEO an'ny Boeing Commercial Airplanes. "Ilay Dreamliner 787 dia handray anjara lehibe amin'ny drafitra fanavaozana ny andian-tafika Azerbaijan, hanampy azy ireo hanokatra làlana vaovao ary handray anjara amin'ny fahombiazany maharitra."
"Faly i Boeing handefa ny programa fifanakalozana fitaovam-pitaterana miisa 787 miaraka amin'i Azerbaijan Airlines," hoy i Stan Deal, filoha sady CEO an'ny Boeing Global Services. "Ity programa ity dia hitazona ny fiaramanidin'ny 787 an'habakabaka ary manome safidy mahomby sy azo itokisana amin'ny fividianana fitaovam-pitaterana vaovao sy ny fanamboarana ny fitaovana."
Azerbaijan Airlines dia mpitondra seranam-piaramanidina lehibe sy indostrialy any amin'ny faritr'i Azia afovoany, toerana 40 any amin'ny firenena 25. Ny fiaramanidina dia manidina fiaramanidina roa miisa 787 ary koa fiaramanidina Boeing 757 sy 767.
Ny Boeing 787 Dreamliner no fiaramanidina kambana mpivarotra haingam-pandeha indrindra teo amin'ny tantara. Mpanjifa mihoatra ny 65 no nandidy Dreamliners mihoatra ny 1,275 hanaraka daty noho ny fahombiazan'ny solika sy ny traikefa tian'ny mpandeha.
Ny fiaramanidina 787 dia nanidina mpandeha maherin'ny 200 tapitrisa nefa nitahiry solika maherin'ny 19 miliara kilao, ahafahan'ny kaompaniam-pitaterana manokatra làlana vaovao tsy miato 170 manerantany.
Boeing's 787 Landing Gear Overhaul and Exchange Program dia manome vahaolana tsotra sy ara-toekarena amin'ny fitantanana ny fanamboarana fitaovam-pitaterana an-tanety, eo am-pananganana ny tantaran'ny programa fifanakalozana Boeing. Amin'ny alàlan'ny tolotra, ny mpitatitra iray dia afaka mifanakalo fitaovana fiambenana izay mila amboarina na amboarina ho an'ny fitaovam-piantsonana voamarina hafa avy amin'ny dobo iray izay tazomin'i Boeing. Io serivisy io dia manala ny filàn'ny mpandraharaha hifanaraka, handahatra ary hitantana ny fizotran'ny fanovana.
Ny Boeing Global Services, izay manana ny foibeny any Texas, dia noforonina tamin'ny fampidirana ireo fahaizan'ny serivisy, ny habaka sy ny sehatra ara-barotra ho lasa orinasa iray mifantoka amin'ny mpanjifa. Miasa amin'ny sehatry ny orinasa fahatelo an'ny Boeing, Global Services dia manome serivisy mailaka sy mora vidy ho an'ny mpanjifa ara-barotra sy governemanta manerantany.
Transat mankalaza ny faha-30 taonany amin'ny alàlan'ny fisidinana fiaramanidina vaovao
Ny mpanao politika kanadiana teraka tany Grenada dia nahazo ny mari-pankasitrahana mandritra ny androm-piainana CTO